दाङमा चार दिनदेखि आमहड्ताल - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
दाङमा चार दिनदेखि आमहड्ताल
आन्दोलन राजमार्ग केन्द्रीत, महिलाहरु थालीसहित प्रदर्शनमा
आमहड्तालका क्रममा दाङको लमहीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा । –तस्विर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर
- पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थाई मुकाम दाङलाई तोक्नुपर्ने माग गर्दै चार दिनदेखि जारी अनिश्चितकालिन आमहड्तालका कारण जिल्लाको जनजीवन ठप्प छ । यातायात, उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, कलकारखाना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा राती पनि गाडी चल्न दिइएको छैन ।
जिल्लाका मुख्य बजार र सडकमा निरन्तर प्रदर्शन भैरहेका छन् । प्रदर्शनकारीले ठाउँठाउँमा टायर बालेर सडक अबरोध गरेका छन् । चार दिनदेखि यातायातका साधन चल्न नसक्दा आवतजावत ठप्प भएको छ । सयौं यात्रु सडकमा अलपत्र परेका छन् । दाङलाई अस्थाई मुकाम तोक्ने निर्णय नगर्दासम्म आमहड्ताल जारी रहने संघर्ष समितिका संयोजक टिकाराम खड्काले बताउनुभएको छ ।
अस्थाई राजधानी दाङलाई तोक्नुपर्ने माग गर्दै चार दिनदेखि जारी आमहड्तालका क्रममा आज पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमहीमा सभा भएको छ । लमहीमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा हेलिकोप्टरबाट आउनुभएको थियो । महराले सरकारले पायक पर्ने स्थानमा अस्थायी राजधानी तोक्न नसकेको गुनासो गर्दै अब प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी परीवर्तन हुने आश्वासन दिनुभयो । नेता महराले जिल्लाका नेताहरुलाई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्लाका उच्च तहका नेताहरुले राजधानी बनाउन पहल नगरेको आक्रोश आन्दोलनमा व्यक्त हुन थालेपछि महरा सभालाई सम्बोधन गर्न आउनुभएको हो । शुक्रबार जिल्लाका बिभिन्न ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, महरा र एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोख्रेलको पुत्ला दहन समेत भएको थियो ।
सभामा सहभागी अन्य नेताहरुले. सरकारले भारतीय सीमा नजिक राजधानी तोकेर भारतलाई खुशी पार्ने खेल गरेको आरोप लगाएका थिए । सभामा जिल्लाका एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलहरुको सहभागीता थियो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ का सदस्य मेटमणी चौधरी, प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत थारु, एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तथा संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक टिकाराम खड्का, काँग्रेसका जिल्ला सभापती किर्ती बहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका जिल्ला ईञ्चार्ज जीवन गौतम, संघर्ष समितिका सचिव निर्मल आचार्य लगाएतले .भूगोल, सुरक्षा र पूर्बाधारका हिसावले उपयुक्त दाङलाई राजधानी नतोकेर सरकारले गल्ती गरेको बताउनुभएको थियो ।
आन्दोलनकारीले लमहीस्थित नगर विकासको निर्माणाधिन कम्लेक्स भवनमा प्रदेशसभा भवन लेखिएको व्यानर पनि टाँगेका छन् । यसैगरी दाङलाई अस्थाई राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै तुलसीपुरका महिलाहरु थाली, डाडु, पन्यु जस्ता भाँडाकुँडासहित सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले तुलसीपुर बजारमा प्रदर्शन गरी आन्दोलन नरोकिने बताए । उनीहरुले भाँडा बजाउँदै नेताहरुलाई सडकमा आउन माग गरेका थिए । सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अगुवा महिला शुष्मा गिरीले बताउनुभयो ।